Fahasamihafana ara-tsaina sy fandrosoana
Misy karazana atidoha efatra. Ny toe-tsaina ara-batana dia mifikitra amin'ny fanahy ara-batana - mpivady sy vady ara-nofo, hanao firaisana amin'ny incubi sy succubi ary ny fahitana ny vatany. Miharihary ny psychic psychic ary mampiasa fahaiza-manao ara-tsaina ambany. Ny toe-tsaina ara-tsaina dia miakatra any amin'ny sehatra ara-tsaina avo kokoa, fa ny ara-tsaina irery ihany no mahalala sy manana ny herin'ny faminaniana ary ny herin'ny sitrapo.
Vol. 7 JONA, 1908. Tsia
TOROHEO PSYCHIC sy FAMPITARANA.
EPIDEMIKA ny karazany samy hafa isaky ny taona. Maro ny valanaretina mitsidika anay, ao amin'izy ireo ny areti-mifindra ara-tsaina. Misy ny areti-mifindra ara-tsaina rehefa misy olona maro ao amin'ny vondron'olona iray manome vahana ny lafiny maha-olombelona azy izay mirona amin'ny mistery ary mifantoka amin'ny lohahevitra toy ny fambara, valisoa, fahitana, fahitana, fifandraisana amin'ny zavaboary amin'ny tontolo tsy hita maso, ary ny fifandraisana miaraka sy mivavaka amin'ny maty. Ireo areti-mifindra ireo, toy ny fihetsehana hafa ihany, dia tonga amin'ny tsingerina na onja. Rehefa mandeha tsara izy ireo dia toa misy fironana ankapobeny amin'ny olona hivoatra ho toy ny fanatanjahantena na ho fandalinana ny psikology sy ny psikolojia. Ny olona samy hafa, ny toe-piainana samy hafa momba ny toetrandro, ny tontolo iainana ary ny tsingerim-potoana manokana na vanim-potoana manokana dia mamoaka dingana ara-tsaina isan-karazany.
Noho ny fihodinan'ny saina maoderina momba ny saina siantifika, ny fandalinana ny psikolojia, ny siansa momba ny fanahy, dia nohitsitsaina ary misy soso-kevitra momba ny fananana, ny fampandrosoana na ny fironana ho amin'ny fandalinana ny fahaizana ara-tsaina izay nesorin'ny saina siantifika. miaraka amin'ny fanesoana sy fanamavoana. Raha manam-pahaizana momba ny ara-tsaina ny olona iray, na nino ny fivoarany, dia noraisin'ny eritreretina mafy ho toy ny mpanandoka, mpihatsaravelatsihy, na tsy mandanjalanja ara-tsaina na adala izany. Ary ny sasany amin'ireo mpandinika mafana fo izay te-hanadihady ny toe-tsaina sy ny psikolojika dia tsy natanjaka loatra hanoherana ny fitaovam-piadiana maneso sy fanamavoana, araka ny fanaon'ireo mpiara-miasa aminy.
Fa nivadika ny fihodinana Ny saina ara-tsiansa dia nanomboka tamin'ny famotopotorana fahaizana ara-tsaina amin'ny olona. Izao no lamaody ho an'ny olona ho eo amin'ny lafiny ara-tsaina: mahita, maimbo ary maheno zavatra hafahafa, ary hahatsapa fahatairana sy moka. Fihetsika haingana avy amin'ny fitiavan-karena maoderina, fa indrindra noho ny vanim-potoana, ny fihodinana na vanim-potoana nidirantsika. Ity tsingerin-tany ity dia mahatonga ny taonan'ny olombelona ho mora tohina amin'ny fitaomana avy amin'ny tontolo tsy hita maso izay manodidina sy mamelona ny tontolontsika ara-batana, na dia toa ireo taloha aza ireo tontolo ireo dia toy ny talohan'ny fiovan'ny zanak'olombelona no nahaliana azy ireo.
Nandritra ny taona maro lasa izay, ny sain'olombelona dia nanisy eritreritra momba ny idealy sy ny zavatra ilaina amin'ny toetrany; fa nanomboka tamin'ny faramparan'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo dia ny saina dia nitarika tamin'ny eritreritra vaovao, amin'ny idealy sy ny hetaheta vaovao. Nisongadina fa misy izao tontolo izao tsy azo fehezina izay mety hisokatra ho an'ny olona. Naseho fa misy ny fahazoana mivoatra lavitra noho izay rehetra noheveriny fa mahavita manandrana na manatratra.
Vokatr'izany eritreritra izany dia maro ny fiaraha-monina no natsangana ho an'ny fandalinana sy ny fikarohana momba ny raharaha ara-tsaina. Ny sasany amin'ireny fiaraha-monina ireny dia mampianatra sy mandrisika ny fampivoarana fahaizana ara-tsaina. Ny sasany dia manao tombantombana amin'izany, ary ny sasany mitrandraka noho ny fahatokisan'ny olona amin'ny fanaovana mody manana sy manome vola amam-pahefana sy fahalalana tsy ananany.
Saingy ny fironana ara-tsaina dia tsy fehezin'ny fiaraha-monina voalamina manokana ho an'io fandinihana sy fampiharana io. Ny onja ara-tsaina dia nisy fiatraikany amin'ny vondrom-pivavahana satria ireo izay tsy liana amin'ny fivavahana manokana. Raha ny tena izy dia miankina amin'ny toetra ara-tsaina sy fironana ataon'ny olombelona ny fivavahana noho ny heriny sy ny heriny ao an-tsainy. Taorian'ny fampianarana voalohany momba ny namorona ny fivavahana sy ny mpiara-miasa aminy dia namolavola fitsipika sy fitandremana fatratra sy haingana, izay ampiharina amin'ny vahoaka. Ireo mpiaro ny fivavahana manokana dia matetika niala tamin'ny fampianarany mba hahazoana mpanara-dia, hanangana fiangonana ary hampitombo ny herin'ny fiangonana. Mba hanaovana izany dia nandao ny antony izy ireo ary niangavy ny toetra ara-tsaina ara-tsaina amin'ny olona. Izy ireo dia namporisika voalohany ny toe-tsaina ara-tsaina ary nandeta ny fankasitrahany, avy eo nifehezana sy nanandevo ny sainy. Sarotra kokoa ny mifehy ny olombelona amin'ny alalan'ny fizotran-tsaina. Tsy ho andevozin'ny saina fotsiny ny saina. Ny fivavahana iray dia mifehy foana ny olombelona amin'ny alàlan'ny fofona ara-tsaina.
Rehefa manomboka ny hetsika ara-panahy dia matetika ny fironana ho an'ny mpanaraka azy dia miharatsy amin'ny fanaovan-tsaina. Raha toa ny fanao toy izany dia alohan'ny hisian'ireo mpikambana ao amin'io vatana io dia mahafeno fepetra ara-batana, ara-pitondran-tena sy ara-tsaina hanombohana ireo fomba fanao, fanakorontanana sy fisafotofotoana ary tranga hafa tsy mampino. Mety tsara ny milaza teny vitsivitsy momba ny fahatongavan'ireo fironana ara-tsaina sy ny faniriana ara-panahy izay miseho ankehitriny.
Ny onjan-tsaina ara-tsaina izay mandalo izao tontolo izao dia nanomboka tamin'ny faramparan'ny taonjato farany. Tao amin'ny faritra iray tany Etazonia New England dia nisy fipoahana ara-panahy izay toa nisy raharaha ifotony teo an-toerana. Saingy ny herin'ny maizina dia iray amin'ireo dingana iray fironana ara-tsaina. Ny fironana ara-tsaina dia notokanana tena tao New York nataon'i Madam Blavatsky, izay namorona ny Theosophical Society, tamin'ny 1875. Ny Theosophical Society dia namboarin'i Madame Blavatsky ho fitaovana miasa amin'ny alàlan'i Theosophy mba homena an'izao tontolo izao. Ny Theosophical Society dia mazava ho azy lahy ary ny lehilahy amin'ny vanim-potoana, raha ny Theosophy kosa no fahendren'ny vanim-potoana. Tamin'ny alàlan'ny Theosophical Society dia natolotr'i Madam Blavatsky ny fampianarana teôsôsika sasany. Ireo fampianarana ireo dia mihatra amin'ny lohahevitra mirakitra ny eritreritra rehetra ary mampiditra ireo olana eran-tany tandrefana izay tsy nodinihina taloha. Izy ireo dia mihatra amin'ny raharaha eto an-tany ary koa amin'ny fanatrarana sy fanatanterahana ara-panahy. Na izany aza, ny Madam Blavatsly isam-batan'olona iray dia mety nipoitra tamin'ny olona sasany, ny fampianarana izay nentiny dia mendrika ny fiheverana sy eritreritra lehibe indrindra.
Ny fiarahamonina maro izay mirotsaka amin'ny raharaha ara-tsaina, sy ny fampandrosoana ara-tsaina sy ara-panahy ny olombelona, ​​dia nahazo ny tena dikan'izy ireo tamin'ny alàlan'ny Theosophical Society. Ny Theosophical Society dia nahafahan'ny solontena avy amin'ny foko sy fivavahana hafa tonga tao amin'ny tontolo tandrefana ary nanolotra ny foto-pampianarany samihafa ho an'ny olona. Ireo Tandrefana izay tsy nandefitra na tsy nihaino ny fivavahana hafa ankoatra azy ireo, noho ny fampianarana Theosophical hafahafa, liana ary vonona ny handinika na inona na inona avy amin'ny "firenena." Tonga ny hazakazaka atsinanana, nahita fihainoana tany Andrefana izy ireo. Na raha ny tombony amin'ny Tandrefana dia miankina amin'ny tsy fivadihan'ireo mpampianatra Atsinanana, ny fahitsiana amin'ny famelabelarana ny fotopampianarany ary ny fahadiovan'ny fiainana.
Taorian'ny nandalovan'i Madam Blavatsky, ny Theosophical Society dia nandritra ny fotoana naharesy lahatra sy nampifangaro azy tamin'ny torohevitr'i Madam Blavatsky momba ny: fisarahana sy ny fisarahana. Na dia teo aza, na dia nosarahana tsy hitovy ny fiarahamonina, dia mitovy ny fampianarana. Saingy rehefa mandeha ny fotoana dia miova kely ny sasany amin'ireo fampianarana. Miaraka amin'ny fizarazarana mitohy, misy ihany koa ny fialana amin'ny fivoaran'ny filozofia sy ara-panahy amin'ny fampianarana ary fironana ho an'ny fanao ara-tsaina. Ny Theosophical Society dia tsy azo atao afa-tsy ny lalàna: raha manohy manome làlana amin'ny sainy ny mpikambana ao aminy, izy ireo, toy ny vatana hafa taloha ihany, dia hiharatsy fitondran-tena, ara-tsaina ary ara-batana ary miafara amin'ny tsy fahafaham-baraka sy ny fahafaham-baraka. Misy antony iray hafa: raha ny fahazoan-kery sasany tsy manam-pahefana dia mahazo fifehezana ny iray amin'ireo Theosophical Sociétika misy ankehitriny izay mety azony amin'ny herin'ny fampiasany amin'ny fampiasany ny fampianaran'ny filozofia miaraka amin'ny fiovana mety hifanentana aminy, ary, manjaka an'io vatana io, miangona fiangonana na ambaratonga mahery vaika. Ny fampianarana toy izany dia tena tsy mampalahelo indrindra ho an'ny zanak'olombelona amin'ny maha-hery, amin'ny alàlan'ny hierarchy, dia hanana fitazona sy manjaka ary manandevo ny sain'olombelona ary mihoatra noho ny fivavahan'olombelona taloha na ankehitriny. Ny Theosophical Society dia nanao asa lehibe tamin'ny fanomezana ampahany ny Theosophy ho an'izao tontolo izao, saingy aleo lavitra tokoa ny hoe ny tsirairay amin'ireo fiaraha-monina ao aminy dia tsy misy afa-tsy ny manana azy na ny ampahany rehetra ao aminy ho ozona toy izany amin'ny zanak'olombelona amin'ny fametrahana ny ambaratongam-panahy ara-panahy avy amin'ireo mpikambana ao aminy amin'ny fahalementsika sy ny tsy fahatomombanan'ny olombelona rehetra.
Ao amin'ny sivilizasiôna hafa, ohatra, ny any Gresy, i Egypt, ary i India, dia nampiasain'ny pretra ny psikolojia. Ny atidohan'izy ireo dia namboarina ho toy ny oracle, ho an'ny tanjona momba ny sikidy, ny fitadiavana, ny fitsaboana aretina ary ny fifandraisana amin'ny hery tsy hita maso. Ny aretin-tsaina eo amin'ny sivilizasiôna dia nampiasaina ho an'ny tanjona mitovy, saingy indrindra indrindra dia efa nampiasaina ho an'ireo mpikaroka liana, mamokatra sensation, ary manome fahafaham-po ny faniriana ambany amin'ireo mpihaza test ary manontany tena ireo tia azy.
Saingy ny fironana ara-tsaina ao amin'ny sivilizasizontsika, raha mihodina amin'ny lalana sy fehezin'ny lalana, dia hanampy antsika hanangana sivilizara ho lehibe sy lehibe sy ambony kokoa noho ny tamin'ny lasa. Amin'ny lafiny iray, ny fironana ara-tsaina dia mety manafaingana ny fanimbana antsika ary manakaiky ny tantarantsika noho ny faniriana feno vola, ny fitiavan-karena, na ny fanomezana fahafaham-po sy ny fiankohofana amin'ny maty. Ity sivilizasiona ity dia tokony ho lehibe kokoa noho ny hafa noho ny taova ara-batana ao amin'ny olona, ​​ny fahafahany mifanaraka amin'ny fepetra, ny fahafahany manova ny toe-javatra, ny fitrandrahana azy, ny fahavononany hahatakatra sy hanao ny tsara indrindra amin'ny toe-javatra iray, ny fitovian'izy ireo amin'ny zava-mitranga maika, ary ny kaonty ny herin'izy ireo sy ny sainy.
Misy ny fatiantoka, ary koa ny tombontsoa, ​​izay mety hateraky ny fironana ara-tsaina sy ny fampandrosoana azy. Na hahazo tombotsoa isika fa tsy manimba ny fironana ara-tsaina dia miankina amin'ny tsirairay tahaka ny an'ny firenena. Ny hery miantraika amin'ny toe-tsaina dia avy amin'ny tontolo hita maso sy tsy hita maso. Amin'ny alàlan'ny tontolontsika hita maso dia misy foana ny milalao sy mifanerasera amin'ireo hery sy herin'ny tontolo tsy hita. Ny tany tsirairay, hita na tsy hita maso, dia manana ny hazakazany sy ny zavaboary miavaka ho azy. Ny orinasam-pifandraisana avy amin'ny tontolo tsy hita maso dia mifandray amin'ny olona amin'ny alàlan'ny toe-tsaina ara-tsaina, ary, araka ny fironana ara-tsaina nataony, ny hery sy ny hery tsy hita maso dia hiasa aminy ary mandrisika azy hanao asa. Ny zavaboary sy ny hery ankehitriny tsy mihetsika amin'ny olombelona amin'ny alàlan'ny toe-tsaina ara-tsaina. Ny fahitana ara-tsaina sy ny feony an-tsaina ary fahatsapana hafahafa dia matetika noho ny fisian'ireo hery sy olona ireo. Na dia tafasaraka amin'izy ireo aza ny olona amin'ny fahitana azy voafetra, ary miampita sy miaro azy ireo amin'ny alàlan'ny vatana vatana matanjaka sy salama, dia azo antoka izy, satria ny vatany dia azy ho fiarovana mimanda. Nefa raha mihamalemy ny rindrin'ny trano mimanda, satria mety amin'ny fanaovan-javatra adala izany, dia hanitsakitsaka azy ny zavaboary tsy hita maso ao amin'ny tontolo tsy hita maso ary hanao azy ho babo. Ny herin'ny natiora dia handroaka azy amin'ny karazana tafahoatra ary tsy hahatohitra ny fanafihana rehetra ataon'izy ireo. Hahatanty azy ny heriny izy ireo, hanao azy tsy hahay hifehy ny vatany, hanandevo azy amin'ny filany, mijery ny vatany, ary manala baraka azy ary hampidina azy ambanin'ny haavon'ny biby.
Amin'izao vanim-potoana eo amin'ny fivelaran'ny olon-tsotra izao, ny fironana ara-tsaina dia toa tsy ilaina aminy toy ny bisikileta bisikileta sy astronomika amin'ny Indiana amerikana iray. Ny tombotsoan'ny fironana ara-tsaina sy ny fahaiza-miaina ara-tsaina dia mahatonga ny olona handray andraikitra amin'ny natiora, ary mametraka azy ao anatin'ny fangorahana amin'ny mpiara-belona aminy. Izy ireo no fitaovana izay mety ampiasainy hahitana sy hahafantatra ny antsipirian'ny zava-boahary sy ny zava-mitranga rehetra. Ny toetra ara-tsaina, raha voaofana tsara dia ahafahan'ny olona miova haingana sy hanatsara ny vatany ary hifehezana azy. Ny toetra ara-tsaina, rehefa voafehy sy hanana kolontsaina, dia ahafahan'ny olona mitondra ao amin'ny tontolo ara-batana ny harena izay azony angonina avy amin'ny tontolo tsy hita maso, hitondra amin'ny fiainana ara-batana ny filana sy endrika tsara rehetra izay notehirizina ao amin'ny tontolon'ny eritreritra. toe-tsaina, sy hanao ny tontolo ara-batana ho vonona amin'ny fahalalana avy amin'ny tontolo ara-panahy.
Ny fironana ho an'ireo izay liana amin'ny fivoaran'ny psikolo-batana sy ny fanabeazana ara-tsaina dia ny miala amin'ny anton-javatra na hanao ny eritreriny fanjohian-kevitra amin'ny alàlan'ny fivoaran'ny toe-tsaina sy tontolo vaovao manokatra azy ireo. Io fialàn'ny saina io dia mahatonga azy ireo handroso. Manamboarana fahaiza-manao vaovao, ilaina, ilaina ny fampiasana azy ary mila ampiharina amin'ny fomba fikarakarana, mandra-pahalalan'ny fahaiza-miaina vaovao ary voafehin'ny fanjohian-kevitra. Ny antony dia tsy tokony havela na oviana na oviana.
Ny olona ao amin'ny tontolo tandrefana, indrindra any Etazonia, dia hanohy ny fironana ara-tsaina, saingy tokony hankasitraka sy hanana fahatakarana tsara kokoa momba ny fampiasana sy ny fanararaotana ny fironana ara-tsaina sy ny fivoaran'izy ireo izy ireo, fa tsy toy ny amin'izao fotoana izao mamela ny toerany ara-tsaina. maneho sy mihazakazaka korontana.
Amin'ny toe-java-misy ankehitriny, ny olona salama ara-batana ara-batana iray dia mifamatotra tsara amin'ny vatany mony mihetsiketsika (♍︎) - ny fitsipiky ny endrika namoronana ny taova ara-batana ao amin'ny vatana.
Ny ankapobeny make-up sy ny toetra mampiavaka ny psikôlôjia dia matetika tsy mitovy amin'ny an'ny lehilahy salama ara-batana. Ny psychic dia iray izay ny molôkôlôpôlozan'ny endriny môdôkôlôpia mikambana amin'ny vatana sy ny sela ara-batana, ary ny endrika astral, noho ny fifandraisany amin'ny sela selan'ny vatana, mora mora kokoa amin'ny fitaoman'ireo tontolo manodidina izay mifanaraka amin'ny toetrany.
Misy ny siansa sy ny psikolojia teraka teraka voajanahary izay lasa toy izany amin'ny fampandrosoana. Teraka ny aretin-tsaina toy izany, noho ny toe-batana ara-batana sy ara-pon'ny ray aman-dreniny na ny toe-javatra ankapobeny dia misy taloha sy amin'ny fotoana fiterahana. Ireo rehetra manana fironana ara-tsaina dia tokony hahalala tsara ny filozofia momba ny toetra ara-tsaina alohan'ny hanandramana ny fampiharana ara-tsaina. Ny fomba tsara indrindra hiadiana amin'ny loza ateraky ny psikology dia ny fandalinana ny filozofia ary ny fivelomana fiainana madio.
Ireo psikôlôma tsy teraka dia mety hamorona taova ara-tsaina sy ho lasa psikôlôjia amin'ny alàlan'ny fanolorana ny sitrapony ary ho lasa tsy mahomby ary manome làlana ny fiantraikan'ny tsapan'izy ireo, na amin'ny fahalemena sy ny fanapotehana ny hery manohitra ny vatan'ny biby amin'ny alàlan'ny fihinanana vegetarian. Ireto avy ny aretin-tsaina tsy mandray andraikitra. Saingy ny zavamananaina ara-tsaina dia mety hivoatra amin'ny alàlan'ny fitarihana ny ataon'ny olona araka ny antony, amin'ny fifehezana ny filan'ny faniriana sy ny faniriana, amin'ny fanatanterahana ny andraikitry ny olona iray, na amin'ny fivoaran'ny saina amin'ny alalàn'ny fanaraha-maso ny asany. Raha arahina ny fizarana farany, ny fivoarana ara-tsaina dia mivoatra amin'ny fomba voajanahary toy ny hazo mamoa ravina, voninkazo, voninkazo ary voankazo amin'ny vanim-potoana mety. Ireo ny psychic voaofana. Vitsy dia vitsy.
Ny fanamboarana psikôlôpika dia toy ny an'ny kaleidoscope. Ny vatana ara-batana dia toy ny casing na sheath, ireo lafiny maro amin'ny lafiny anatiny toa ny feon'ny fieritreretana ampiasaina; ny zavatra miloko sy tsy misy loko izay mitsatoka amin'ny vera isaky ny andalany tranga toa ny eritreritra sy ny faniriana atsipy ary taratry ny fitaratra na vatana astral, ny maso izay ahatongavany ny endrika dia toa ny saina ao amin'ny vatana. ary ny manan-tsaina izay manavaka ny zavatra hita dia toa ny tena olona. Satria tsy mitovy ny kaleidoscope, dia samy hafa ny kalitao sy ny fahasamihafan'ny olona izay mitantana ny kaleidoscope, dia toy izany koa ireo izay mampiasa ny toerany ara-tsaina.
Ireo teny hoe "psychic," "psychism" sy "psychology" dia ampiasaina matetika, fa ny tsy fitoviana dia tsy voasarika tsara araka ny tokony ho izy. Ny teny hoe psykika dia avy amin'ny teny grika hoe Psyche, tovovavy mahafatifaty mahafatifaty, fanahy maha-olona, ​​izay niatrika fitsapana sy zava-tsarotra maro, saingy farany dia nanjary tsy mety maty amin'ny farany mampiray amin'ny fanambadian'i Eros. I Psyche mihitsy no midika hoe fanahy, ary ny teny rehetra ao amin'io awana io dia misy ifandraisany amin'ny fanahy; fa ny toe-tsaina dia ilay avy amin'ny fanahy. Saingy ny siansa ara-tsaina toy ny mahazatra dia misy ifandraisany amin'ny fihetsika ara-batana eo amin'ny toetran'ny toetra, fa tsy araka ny tokony ho izy. Ny psikology dia ny siansa fanahy, na ny siansa amin'ny fanahy.
Amin'ny heviny manokana kokoa, na izany aza, ary araka ny angano grika, Psyche ao amin'ny olona ny mony molekiolan'ny astral, na ny fitsipiky ny endrika (linga-sharira). Psyche dia voalaza fa mety maty satria ny vatana molekiola molekiolan'ny astral dia maharitra raha tsy hoe manao vatana ara-batana, mifanohitra aminy. Ny rain'i Psyche dia mety maty ihany koa satria ny toetrany taloha dia niharan'ny fahafatesana koa izy. Ny vatany molekiola mivaingana amin'ny endrika ankehitriny dia ny fitambaran'ny sy ny vokatry ny eritreritry ny olona talohan'ny fiainana - amin'ny heviny iray ihany fa eo amin'ny fiainana ankehitriny ny faniriana sy eritreritry ny olona iray dia manangana ny fiainany manaraka ny vatana môleolika molekiola. ary arakaraka izay hananganana ny zavatra ara-batany. Psyche malalan'i Eros, izay anarana no ampiasaina amin'ny sehatry ny saina. Ny Eros izay tia voalohany an'i Psyche no fitsipiky ny faniriana, izay tsy hitan'i Psyche hampiray azy. Ny psyche ny endrika molekiola molekiola dia ny vatana izay iainan'ny fahatsapana rehetra toy ny fahafinaretana sy fanaintainan'ny tsinaibe; no mpanome fahafinaretana amin'ny faniriana. Fa amin'ny endrika mety maty dia maty. Raha toa kosa i Psyche, ilay vatam-panjakan'ny molaly mivaingana, ny fanahy mety maty, dia afaka mandia ny zava-tsarotra rehetra sy ny fitsapana apetraka ao aminy, dia mandalo metamorphose mitovy amin'ny an'i Psyche sy ny famantarana azy, ny lolo, ary niova ho lasa fiainana hafa: avy amin'ny mety maty tsy mety maty. Mitranga izany rehefa miova ny vatana molekiola molekiolan'ny astraly manomboka eo amin'ny fiainana an-tany maharitra ho lasa tsy mety maty; tsy misy fahafatesana intsony izy io, satria nipoitra avy amin'ny toetran'ny vatana ara-nofo. Indraindray i Eros dia ampiasaina hanondroana io ampahany amin'ny saina avo kokoa io, amin'ny maha-olona azy, izay miditra ao amin'ny vatan'ny molekiola molekiola (linga-sharira) ary tonga nofo amin'ny vatana ara-batana. Noho ny fitiavan-tsaina ny endriny mety maty, Psyche, ao amin'ny vatana ara-batana, dia voavonjy sy natsangana tamin'ny maty i Psyche, ny ain'olombelona manokana, ary natsangana tamin'ny maty ary lasa tsy mety maty amin'ny firaisana amin'ny saina. Ireo fampiasa samihafa natao tamin'ny anarana hoe Psyche sy Eros ary ny misterin'ny fifandraisan'i Eros amin'i Psyche, ilay fanahy maha-olombelona mety maty dia ho fantatra mazava kokoa rehefa lasa mifankahalala amin'ny toetrany manokana ny olona ary mianatra manavaka sy mampifandray ny olom-boafaona hafa. ireo singa sy fitsipika izay mahatonga azy ho be pitsiny. Ny fandalinana ny psikolo-pinoana dia hanaporofo ny olona fa izy dia natao ho an'ny Psyches, na fanahy maro.
Misy karazana fizika efatra: ny fizika ara-batana, aretin-tsaina ara-tsaina, aretin-tsaina, ary ara-panahy, izay aseho amin'ny zodiakin'ny famantarana famantarana libra, (♎︎) virgo-scorpio, (♍︎ – ♏︎), leo-sagittary, (♌︎ – ♐︎), homamiadana-capricorn (♋︎ – ♑︎). Ireo karazana efatra ireo dia aseho ary hazavaina ao The Teny, Vol. 6, No. 3, pejy 4-7. Amin'ny zodiaka samihafa ao anatin'ny zodiaka tanteraka, ny zodiaka tsirairay dia maneho ny olombelona.
Mety misy mamolavola ny toe-tsainy ara-tsaina (libra, by) amin'ny alàlan'ny famotehana ny fahasalamany ara-batana, amin'ny sakafo tsy mendrika, ny fifadian-kanina, ny fitsaboana maloto ary ny fanararaotana amin'ny vatana, toy ny fisotroan-toaka, ny zava-mahadomelina, amin'ny fanaintainana, ny fanaovan-dratsy, amin'ny flagellation, na amin'ny fanararaotana tafahoatra.
Ny toetra psychic astral (virgo-scorpio, ♍︎ – ♏︎) dia mety hivoatra amin'ny fijerena tsy mihetsika amin'ny toerana mamirapiratra, na amin'ny fipetrahana irery ao anaty haizina amin'ny saina pasifika, na amin'ny fanerena ny eyeballs sy ny fanarahana ny loko hita na, na amin'ny alàlan'ny fitsaboana magnetika, na amin'ny alalàn'ny tsangambato, na amin'ny fandoroana ditin-kazo manitra, na amin'ny birao ouija, na amin'ny fanatrehana ny herin'ny maizina, na amin'ny famerimberenana sy ny fihirana ny teny sasany, na amin'ny fiheverana ireo lamosina ara-batana, na ny orona, manaintaina ary hitazona ny fofon'aina.
Ny toetra ara-tsaina (leo-sagittary, ♌︎ – ♐︎), dia tokony hovolavolain'ny fanao ara-tsaina, toy ny fananganana sary ara-tsaina, amin'ny fanomezana endrika ara-tsaina amin'ny loko ara-tsaina, ary amin'ny fifehezana ny fiasan'ny saina rehetra amin'ny alàlan'ny fisaintsainana.
Ny fivoaran'ny toetra ara-tsaina ara-tsaina (cancer-capricorn, ♋︎ – ♑︎) dia ateraky ny fanaraha-maso ny fiasan'ny saina rehefa afaka mamantatra ny tenany amin'ny tontolon'ny fanahy ara-panahy, izay ahitana ny dingana hafa rehetra. ny toetra ara-tsaina no takatra.
Ny fahazoana, ny hery na ny fahaiza-manao novolavolain'ireo kilasy taloha ireo dia:
Voalohany: ny finoana ny sy ny fanaon'ny mpivady ara-panahy ara-batana, na ny firaisana ara-nofo miaraka amin'ny tena incubi na succubi, na ny fijerin'ny vatan'olona iray hafa.
Faharoa: ny fivoaran'ny clairvoyance na clairaudience, ho toy ny mediumization, na trance medium, na mediam-panorana, na somnambulism.
Fahatelo: ny fahitana ny fahitana fahitana faharoa, na ny psychometry, na ny telepathy, na ny sikidy, na ny ecstasy, na ny fisaintsainana mahery vaika - ny fivoaran'ny sary.
Fahaefatra: ny fahazoana fahalalana, na ny fahaizan'ny faminaniana, na ny hery hamoronana am-pahalalana - ny hery sitrapo.